महिलाको 'चुल्ठो काट्ने' किरा ! २० वटा उजुरीपछि अनुसन्धान सुरु- रोचक - कान्तिपुर समाचार
महिलाको 'चुल्ठो काट्ने' किरा ! २० वटा उजुरीपछि अनुसन्धान सुरु
भाद्र ७, २०७४ शंकर आचार्य
पर्सा — दुई साताअघि वीरगन्ज–१६ नगवाकी ३० वर्षीया बगडी चमार ओछ्यानमा बेहोस भइन् । उनलाई तत्काल नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल लगियो । होसमा आएपछि उनले कसैले आफ्नो चुल्ठो काटेकाले बेहोस भएको बताइन् । यस्तो घट्ना थपिंदै जान थालेपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुई साताअघि वीरगन्ज–१६ नगवाकी ३० वर्षीया बगडी चमार ओछ्यानमा बेहोस भइन् । उनलाई तत्काल नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल लगियो । होसमा आएपछि उनले कसैले आफ्नो चुल्ठो काटेकाले बेहोस भएको बताइन् ।
साउन ३० गते वीरगन्ज–३ छपकैयाकी ३० वर्षीया तबस्मुन खातुन पनि सिँढीबाट ओर्लंदै गर्दा बेहोस भइन् । उनको पनि चुल्ठो काटिएको थियो । आफूलाई कसैले पछाडिबाट प्रहार गरेको खातुनको दाबी छ ।
पछिल्ला दिन यस्ता घटनाको उजुरी बढेपछि प्रहरीलाई टाउको दुखाइ भएको छ । प्रहरीले यी घटनाका पीडित दाबी गरिएका महिलामाथि अनुसन्धान थालेको छ । प्रहरी उपरीक्षक सुदीप गिरीले जनजीवन आतंकित बन्दै गएपछि ठूलो रूप नलेओस् भनेर अनुसन्धान थालिएको बताए । ‘हामीले अस्पताल आएका महिलाको केस स्टडी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूको अन्तर्वार्ता, भिडियो रेकर्ड राख्ने, मानसिक, शारीरिक र मनोवैज्ञानिक अवस्था अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
उनका अनुसार अहिलेसम्म यस्ता २० वटा उजुरी आएको र तिनमा सबै घटना रातको समयमा भएको दाबी गरिएको छ । महिलाहरूले घर बाहिर शौच गर्न जाँदा, घरआँगनको काम गरिरहँदा, घाँस काटिरहँदा यस्तो घटना भएको जनाएका छन् । केहीले घरमै खाना पकाउँदा, टेलिभिजन हेरिरहँदा र सुतिरहेको अवस्थामा चुल्ठो काटिएको बताए । चार जनाले भने नौलो र ठूलो कीरा आएर कपाल टोकेको प्रतिक्रिया दिए । पछाडिबाट धक्का दिइएको, कालो बिरालो, सेतो, कालो र चम्किलो छाया आएको दाबी गर्नेहरू पनि छन् । सबैले चुल्ठो पछाडिबाट काटिएको जनाएका छन् ।
उजुरी थपिँदै गएपछि उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेसु डा. चित्तरञ्जन साहसहितको मेडिकल टोलीसँग पनि छलफल गरिएको गिरीले बताए । यसरी उपचारका लागि आउने महिलालाई मनोचिकित्सकसँग परामर्श गराउने काम पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए । चुल्ठो काटिएको दाबी गरिएका अधिकांश महिला शारीरिक रूपमा कमजोर, सुत्केरी र दीर्घरोगी छन् । भारतमा यस्तो घटना भएको भनी सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएकाले भारतीय प्रहरीसँग पनि छलफल गरेको गिरीले बताए ।
‘इन्टरनेटमा खोजी गर्दा भारतको राजस्थान सरकारले ‘मैकी’ नामक कीराले कपाल काट्ने गरेको दाबीसहितको सूचना जनहितमा जारी गरेकोसमेत भेटियो,’ उनले भने ।
प्रकाशित : भाद्र ७, २०७४ १८:०६
प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतमा रहेका नेपालीको मागैमाग
नयाँदिल्ली — भारतमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध प्रवासी नेपाली संगठनहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपालीले भोगेका समस्याहरु समेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र लिएपछि नेपाली दूतावासमा भेलाभएका नेपालीहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भारतमा रहेका नेपालीहरुले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन काम गर्नुपर्ने बताए । देउवाले खुला सीमा लगायत विभिन्न कारणले नेपाल र भारतको सम्बन्धविशेष रहेको बताए । उनले भारत निवासी नेपालीको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् ।
प्रवासी नेपाली संगठनका मागहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
भारतमा अस्थायी पेसामा लागेका नेपाली वा व्यापार व्यवसायअन्य संस्थामा कार्यरत नेपालीहरुको बैंक तथा फाइनान्स संस्थामा खाता खोल्न निकै कठिनाई देखिएकाले नेपाली राजदूतावासबाट आवश्यक काजपत्र जारी गरी त्यसको आधारमा खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने प्रवधान गरियोस् ।
दूरसञ्चारका सम्बन्धमाअन्य देशहरुसरह लाग्ने सार्क मुलुकमा पनि निर्धारण गरी नेपाल–भारत बीचमा हुने फोन सेवा सोहीबमोजिम साधारण निम्न शुल्क निर्धारण गर्न ।
महिला अपहरणकारी, तस्करी, नारी उत्पीडन, बलात्कार, चेलिबेटी बेचबिखनजस्तो कार्य गर्ने अपराधीलाई आवश्यक कारबाही तथा सजाय ।
नेपालबाट भारत तथा चीन सीमाहरुका प्रत्येक नाकामा सीसीटीभी जडान र प्रशासनमा सुधार ।
शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गरी शिक्षक र कर्मचारी वर्गले राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था गरियोस् ।
देशका कृषकलाई माथि उठाउन कृषक विमा योजना कृषि विकास बैंकमार्फत लागू गरियोस् ।
तराई क्षेत्रमा जथाभावी कृषियोग्य जमिन भूमाफियाहरुले खरिद बिक्री गर्ने काम रोक्का गर्नुपर्ने ।
वन तथा जंगल फँडानी गरी बस्ती बसाउने काम तत्काल रोक लगाउन ।
नेपालबाट सार्क मुलुकमा अध्ययनका लागि आउने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई सम्बन्धित देशको प्रचलित मुद्रामा शुल्क भुक्तान गरिनुपर्ने ।
नेपालबाट चेलीबेटीहरुलाई भारतबाट खाडी मुलुकमा पुर्‍याई बेच्ने कार्य बढ्दो भएकोले तत्काल त्यस्तो दलालको पहिचान, कारबाही तथा चेलीहरुलाई चेतनाको प्रचार गर्नेलगायत छन् ।